Ny rindranasa efatra tsara indrindra hianarana Alemanina amin'ny Android | Androidsis
Ny Alemanina dia fiteny iray izay manapa-kevitra ny hianatra bebe kokoa ny olona. Indrindra ankehitriny fa olona maro no handeha hianatra na hiasa any Alemana. Ny ampahany tsara dia ny findaintsika Android afaka manampy be rehefa hianatra fiteny vaovao, amin'ity tranga ity dia alemà. Satria manana rindranasa maro natao ho azy izahay.
Noho izany, etsy ambany no avelanay anao ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android izay ananantsika amin'izao fotoana izao hianarana alemà. Ka raha efa mianatra ianao na te-hanao azy dia hanampy be amin'ny fianarana ilay fiteny izy ireo.
Ireo rindranasa rehetra ireo dia hita ao amin'ny Play Store ary maro amin'izy ireo maimaim-poana. Ka tsy handany vola ianao raha mianatra fiteny vaovao toy ny alemanina. Tsy misy isalasalana, antony manosika tsara ho an'ireo liana amin'ny fampitomboana ny fahalalany ilay fiteny. Fampiharana inona avy no nahavita an'io lisitra io?
4 Mitete: Mianara Alemanina
Manomboka amin'ny iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra amin'ny fianarana fiteny amin'ny Android izahay, miaraka amina fiteny 12 samihafa. Anisan'izy ireo, mazava ho azy, mahita alemà isika. Ny iray amin'ireo tanjany dia izany mahita fanazaran-tena amin'ny fotoana tena izy isika ahafahantsika mampihatra ilay fiteny resahina. Manana fitsapana sy fanazaran-tena isan-karazany koa izahay izay manampy amin'ny fanatsarana ny feonay. Izy rehetra dia tena ilaina tokoa amin'ny dingan'ny fianarana sy fanatsarana ny haavon'ny Alemanina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Fividianana izy ireo mba hananana fanazaran-tena sy fitsapana isan-karazany.
Mianara miteny Alemanina miaraka amin'i Busuu
Fampiharana iray hafa izay azo antoka fa ho fantatry ny maro, satria izy io dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hianarana fiteny, ao anatin'izany ny Alemanina. Ny mampiavaka azy dia hoe mampiala voly tokoa. Manolotra fanazaran-tena isan-karazany izahay, noho io izay mahaliana, miovaova ary ny fianarana amin'ny fomba maro samihafa. Noho izany mianatra mamaky, manoratra ary fitsipi-pitenenana isika, izay zavatra manan-danja lehibe amin'ny Alemanina. Ho fanampin'izany, miavaka amin'ny maha-fampiharana azy izay tena mora ampiasaina izy, izay mahatonga azy ho mahafinaritra tokoa ny mampiasa azy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Ity rindranasa fahatelo amin'ny lisitra ity dia miloka amin'ny rafitra hafa manampy antsika hianatra teny alemà. Amin'ity tranga ity dia tsy mampiasa fitsapana, fitsapana na fanatanjahan-tena izy ireo. Fa ny hataon'izy ireo dia ny fampidirana anay any amin'ny efitrano fifampiresahana hahafahanay miteny sy mampihatra ilay fiteny miaraka amin'ny olon-kafa. Ka izany dia fampiharana natao ho an'ny olona izay efa nianatra teny alemanina nandritra ny fotoana elaela ary te-hanomboka hampihatra ilay fiteny amin'ny olon-kafa. Amin'io lafiny io dia fampiharana tena ilaina tokoa izy io. Satria hitantsika ny fomba ampiasain'ny olon-kafa an'io fiteny io.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra. Azontsika atao ny manandrana azy maimaim-poana mandritra ny fiandohana, na dia mety handoa vola aza ianao taty aoriana.
Mitete: Mianara Alemanina
Ireo fampiharana taloha ireo dia mamela anao hianatra fiteny maro kokoa. Fa raha mitady zavatra mifantoka fotsiny amin'ny Alemanina ianao, dia ity fampiharana ity no safidy tsara indrindra ananantsika. Satria mifantoka amin'ilay fiteny izy io. Manana fanazaran-tena maro izahay, indrindra ny voambolana misy amin'ny fampiharana. Ka fantatsika ny teny manan-danja indrindra ary inona koa no hampiasaintsika isan'andro. Manana isika manao fanazaran-tena koa amin'ny fitsipi-pitenenana izay manampy anay hianatra ilay fiteny. Ny famolavolana azy dia iray amin'ireo lakilen'ny fampiharana. Namboarina tsara, saingy sariaka amin'ny mpampiasa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Ny fividianana sasany dia mety hahatratra 190 euro, izay tena mahatsikaiky sy tsy ilaina.
Mitete: Mianara Alemanina. Mitenena Alemanina.
Developer: Potika ny fiteny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra hianarana Alemanina amin'ny Android
Meizu M8c: Ny filokana eo amin'ny sehatra fidirana amin'ny fanekena endrika
Ny lalao Sudoku tsara indrindra ho an'ny Android